Halkan ka daawo video Waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Somaliland soo maraa uu madaxtooyaa ku qaabilo ardey wax ka barata dugsiysada sare ee Somaliland | Somaliland Hargeisa City
Halkan ka daawo video Waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Somaliland soo maraa uu madaxtooyaa ku qaabilo ardey wax ka barata dugsiysada sare ee Somaliland
7 March, 2013 — somaliland1991
war madaxweynaha somaliland oo la kulmay ardayda
Halkan hoose ka arkhriso faallo amuurtan ka hadlaysa!!!!!!!!!
Faallo: Madaxweynuhu Wuxuu Qaaday Tallaabo Aanay Qaadin Madaxweynayaaashii Ka Horreeyey Taasoo La Odhan Karo Waxay Soo Hoyn Kartaa Guullo Hor Leh. By C/salaam-Abuhurayra
(Hadhwanaagnews) Thursday, March 07, 2013
Salaasadii ayey ahayd markii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay arday soo booqatay oo ka kala socotay
Jidhiidhico ayaa iga kacday markaan arkay madaxweyne Dr Axmed-Siilaanyo oo ubaxii dalka ku qaabilay qasrigiisii, Isla markaana hadallo isugu jira hoga-tusaalayn iyo hanuuninba si niyad-sami ah ugu jeedinaya.
Salaasadii ayey ahayd markii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay arday soo booqatay oo ka kala socotay Shan ka mida dugsiyada Sare ee dalka. War la maqlo, la arko, ama la akhristaba waa kii iigu saamaynta badnaa ee dhammaan jidhkayga oo dhan raadeeyey jidhiidhicana ka kiciyey.
Marka aynu indho fayow, garaad fiican iyo fiiro dheeriyaba ku eegno maxaynu ku qiimayn karnaa erayadan qiimaha badan ee kasoo yeedhaya afka madaxweyne qaabilay qaar ka mida ardaydiisii ?Madaxtooyadu waa madaxtooyadiinii, madaxweynuhu waa madaxweynihiinii, wasiiradu waa wasiiradiinii, masuuliyiintu waa masuuliyiintii bari idinku wareejinayey, markaa cida ay meeshani sugayso mustaqbalka waa idinka?
Walaalayaal maxaad ka dheehan kartaa erayadaasi oo furutaankoodiina ay kuwan yihiin ?Aad iyo aad ayaan idiin soo dhawaynayaa waa markii u horeysa dhalinyaro idinka oo kale ah timaado madaxtooyada, isla markaana aad daawanaysaan habka iyo nidaamka loo shaqaynayo, waxaanay taasi muujinaysaa in dalkan la wada leeyahay, halkana kolay qaar idinka idin ka mid ah uunbaa fadhiisan doona Insha Allah goorta ay doonto ha ahaatee, dalka idinka ayaa leh mustaqbalkiisiina waad tihiin, markaa aad baan idiinku soo dhawaynayaa xafiiska madaxtooyada?
Tallaabadan uu qaaday madaxweynuhu waa mid gaar ahaan isaga u suntanaan doonta, waa mid la odhan karo waxay horseedi doontaa guulo badan oo dhinacyo kala duwan leh. Waa mid sare u qaadaysa rajadii iyo yuhuuntii ardayda. Waxaanay ardayda iyo guud ahaan bulshada reer Somaliland-ba ku abuuraysaa yididiilo hor leh.
Waxa aan aad iyo aad ugu ammaanayaa tallaabadaasi qumman ee uu madaxweynuhu horseedka ka noqday. Taasoo dabadii mooyee horraantii aanu jirin madaxweyne xilkan soo qabtay oo ku tallaabsaday tallaabada caynkaasiya. Waxaanan leeyahay Ilaahay hakaa abaal-mariyo madaxweyne waad asiibtaye.
Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa Wasiirka Wasaaradda Waxbarashad Jamhuuriyadda Somaliland marwo Samsam Cabdi Aaden oo hoggaanka haysay guushaa u soo hoyatay madaxweynaha. Waxaanay marwo Samsam ay isbeddel muuqda oo la taaban karo ku samaysay Wasaaraddii Waxbarashada iyo guud ahaan tacliintii dalkaba.
Run ahaanna markii ay Samsam la wareegtay xilka wasaaraddan, waxay tacliintu ahayd mid dhulka taallay balse Ilaahay wuxuu ku guuleeyey inay tacliintii day dhaska ka afuufto korna u ddallacdo, waxaanad arkaysaa waxbarashadii dalka oo dardar hor leh gashay, ardaydii iyo macalimintii oo si habsamiya isula jaan-qaaday.
Mustaqbalka Waxbarashada Somaliland waxuu haatan u muuqdaa mid widh-widhaya, oo hiigsi iyo hayaan dheer ku socda. Waxaana la odhan karaa Ilaahay ka sakow guushaa waxaa iska leh Marwo Samsam Cabdi Aaden Iyo Madaxweynihii soo doortay mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Ugu dambayntii waxaan leenayahay Madaxweyne waad ku mahadsantahay tallaabadaasi, waanan kugu hambalyeynayaa, waxaanan Ilaahay kaaga baryayaa inuu kugu asturo xilkaa culus ee aad ummadda u hayso.
« Madaxweynihii dalkaVenezuela, Hugo Chaves oo shalay 6 marsh 2013 ku geeriyooday Dhakhtarka ciidamada ee Caasimadda dalka Venezuela, Caracas
Daawo sawirrada Dab maanta ka kacay xaafadda state House ee caasimadda Somaliland, Hargeysa »